कानुन दिवसको अवसरमा न्याय परिषद् सदस्य र अध्यक्षबीच झण्डै हातहालाहाल ! – " कञ्चनजंगा News "
कानुन दिवसको अवसरमा न्याय परिषद् सदस्य र अध्यक्षबीच झण्डै हातहालाहाल !
No Comments on कानुन दिवसको अवसरमा न्याय परिषद् सदस्य र अध्यक्षबीच झण्डै हातहालाहाल !
काठमाडौं : कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित सर्वोच्च अदालतको विशेष कार्यक्रममा न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठबीच झण्डै हातहालाहाल भएको छ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको कार्यक्रम समापनपछि सिटौला र श्रेष्ठबीच चर्काचर्की भएको हो। चियापान समारोह सकिएपछि सिटौला र श्रेष्ठको मञ्च अगाडि जम्काभेट भएको थियो। भेटका क्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बारले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएको विषयमा सिटौलासँग जिज्ञासा राखेका थिए। न्यायाधीश सिफारिस विवादमा परेपछि सर्वोच्च बारको आग्रह अनुरुप नेपाल बारले न्यायपरिषद्सँग एक महिना अगाडि आधार र कारण सहितको सूचना माग गरेको थियो। यही विषयमा श्रेष्ठले जिज्ञासा राखेका थिए।
श्रेष्ठले परिषद्ले बारको मर्यादा नबुझेको र जथाभावी गरेको भन्दै सिटौलासँग गुनासो पोखे। त्यसपछि सिटौला एकाएक आक्रोशित भए। सिटौलाले श्रेष्ठलाई औंला ठड्याउँदै भने, ‘मैले विवरण पठाउँदिन। तैले के गर्न सक्छस् गर। यो सुनेपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आवेग थाम्न सकेनन्। ‘बारको गरिमा र मर्यादा नबुझेको’ व्यक्तिका रुपमा सिटौलालाई औंल्याए। श्रेष्ठले यत्ति भनेपछि चर्काचर्की अझ थपियो।
त्यहाँ उपस्थित न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बारका पदाधिकारीले दुवैको हात समातेर पन्छाए। सिटौला र श्रेष्ठ सर्वोच्च गेट नजिक पुगेपछि फेरि दुवैजनाले औंला ठड्याउँदै भनाभनमा उत्रिए।
हात हालाहालको अवस्था आउन नदिन फेरि कानुन व्यवसायीले सिटौलालाई उनको गाडितर्फ लगे। सिटौला गाडिभित्रै भुनभुनिदै बाहिरिए। श्रेष्ठले पनि बारलाई उपेक्षा गर्दै हेपेको भन्दै कानुन व्यवसायीसँग गुनासो गरे। सिटौला नेपाल बार एसोसिएसनकै कोटामा न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका थिए।
← मोटरसाइलमा तीन जना बोक्ने यी प्रहरीलाई कारबाही होला त ? → रवीन्द्र अधिकारीले देखेको सपना पूरा गरेरै छोड्छु- राजकुमार क्षेत्री